Dhismaha Warshadaha - Shiinaha Zhenyuan Qaabdhismeedka Birta Injineernimada Co., Ltd.
Dhirta warshadaha waxaa loo qaybin karaa dhismayaal warshadeed oo hal dabaq ah iyo dhismayaal warshado leh oo dhowr dabaq ah iyadoo loo eegayo noocyada qaabdhismeedkooda dhisme.
Inta badan dhirta ku jirta dhismayaasha warshadaha dabaqyada badan waxaa laga helaa warshadaha iftiinka, korantada, qalabka, isgaarsiinta, daawooyinka iyo warshadaha kale. Dabaqyada dhirta noocaas ah guud ahaan aad uma sarreeyaan. Naqshadooda nalka waxay la mid tahay tan cilmi baarista guud iyo dhismayaasha shaybaarka, qorshooyinka nalalka dhaadheer ayaa inta badan la qaatay. Dhirta wax soo saarka ee farsamaynta farsamada, metallurgy, textile iyo warshadaha kale guud ahaan waa dhismayaal warshadeed oo hal dabaq ah, sida ku cad baahiyaha wax soo saar, inbadan ayaa ah warshado warshadeed oo hal dabaq ah, oo ah dhir fara badan oo is barbar socda, iyo fidintu waxay noqon kartaa mid la mid ah ama ka duwan wixii loo baahan yahay.
Iyadoo lagu saleynayo buuxinta shuruudaha dhismaha qaarkood, ballaca dhismaha (taako), dhererka iyo dhererka dhirta hal-dabaq ah waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo baahida farsamada. Xawaaraha B ee dhirta: guud ahaan 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, iwm. Dhererka L ee dhirta: sida ugu yar tobanaan mitir, sida ugu badan boqollaal mitir. Dhererka H ee dhirta: kan hoose guud ahaan waa 5-6m, kan sarena wuxuu gaari karaa 30-40m ama xitaa ka sareeya. Dhererka iyo dhererka geedka ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu tixgeliyo nalka nalka geedka. Intaas waxaa sii dheer, sida ku xusan sii wadida wax soo saarka warshadaha iyo baahiyaha gaadiidka wax soo saarka ee u dhexeeya qeybaha, dhirta warshadaha badankood waxaa lagu qalabeeyaa wiishashyo, oo leh miisaan qaadis fudud oo ah 3-5t iyo culeys qaadista balaaran oo boqolaal tan ah.
Heerka naqshadeynta dhirta warshadaha waxaa loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka geedka. Naqshadeynta dhirta waxay ku saleysan tahay baahida habka farsamada iyo xaaladaha wax soo saar waxayna go'aamisaa foomka geedka.
Qeexitaannada Naqshadeynta ee Dhirta caadiga ah
I. Naqshadaynta dhirta warshaduhu waa inay hirgeliyaan siyaasadaha qaran ee khuseeya, ayna gaaraan tiknoolajiyad horumarsan, caqli gal dhaqaale, nabadgelyo iyo codsi, hubiyaan tayada, ayna buuxiyaan shuruudaha ilaalinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
II. Qeexitaankani wuxuu ku habboon yahay naqshadeynta dhirta warshadaha ee dhowaan la dhisay, la dayactiray lana ballaariyey, laakiin maaha qolalka nadiifka ah ee bayoolojiga leh bakteeriyada sida walxaha xakamaynta Qodobada qeexitaankan ee ku saabsan ka hortagga dabka, daad gureynta iyo goobaha ka hortagga dabka waa in aan lagu dabakhin qaabeynta dhirta warshadaha dhaadheer iyo dhirta warshadaha ee dhulka hoostiisa oo leh dherer dhisme ka badan 24m.
III. Markaad isticmaaleyso dhismooyinka asalka ah ee dayactirka farsamada nadiifka ah, qaabeynta dhirta warshaduhu waa inay ku saleysnaadaan shuruudaha teknolojiyadda wax soo saarka, la jaanqaadida tallaabooyinka xaaladaha maxalliga ah, loola dhaqmo si ka duwan sidii hore, iyo in si buuxda looga faa'iideysto xarumaha farsamada ee hadda jira.
IV. Naqshadaynta dhirta warshaduhu waa inay u abuurto shuruudo lagama maarmaan u ah rakibaadda dhismaha, maaraynta dayactirka, tijaabinta iyo hawlgal ammaan ah.
V. Marka lagu daro hirgelinta qeexitaankan, qaabeynta dhirta warshaduhu waxay sidoo kale waafajineysaa shuruudaha ku habboon ee heerarka iyo tilmaamaha qaranka ee hadda jira.
Mashruuca Warshada Wax Soo Saarka
Kaydinta Qabow iyo Mashruuca Silsiladda Qabow